Uhambo lokuqalisa - I-Afrikhepri Fondation
Siyabonga ngokuthanda ikhasi lethu le-Facebook
NgoLwesine, Okthoba 22, 2020
Funda: 35 imiz
I sengizoxoxa indaba engaqondakali futhi emangazayo. Indaba yokuphinda kubanjwe phakathi kwesisindo somzimba okuthi usuku nosuku kuphele amandla nomphefumlo ohlale uphunyuka, indaba yendoda eyodwa ekufuneni unkulunkulu ohlala ethule.
Kwaqalwa ngobusuku obuhle behlobo, ngangihlala ekamelweni lami futhi ngacelwa ukuba ngibe nomgomo wokuphila kwami. Ukulala emhlane wami, ngangiphupha ngokuphila okuphakade lapho ngiphupha khona ngokuphila kwamapantasmagorical. futhi ukuvumelana kungabusa.
Leli zwe eliphikisayo enganginalo ekhanda lami, lalimelela isithelo sethemba lami.
Sithanda ukujabulela injabulo yepharadesi elinjalo, kodwa senzani lokho? Amadoda afana nokuthakazelisa ukungaboni nokukhononda ngaso sonke isikhathi. Bakhala ngenhlanhla yabo embi ngenkathi belinde ukuhlinzeka ukuze babasindise. Kodwa, ngenqaba ukuhlala ngingacabangi ngokucabanga ukuthi izimo zokuphila zaziyobe zithandwa kimi. Kwadingeka nje nginikeze incazelo empilweni yami. Khona-ke, ngathatha isinqumo sokuyeka ukucabanga nokuqala ukwenza. Ngiphuma embhede, ngazithola ngakwesokudla kombhede, ngimi ngezinyawo zombili.
Khona-ke, ngokuqiniseka okuqinile ngalokho engangikufuna ukukwenza, ngangihamba negunya lokugeza. Lapho nje ngingena ekamelweni, ngimi phambi kwesibuko esikhulu esinqunyiwe ngamathayili aqhakazile.
Okokuqala, ngahlala ngididekile ekubukekeni kwami ​​njengoba ubuso bami engilazini ebuphuculiwe bucishe bufana naleso engangizibona isikhathi ngasinye lapho ngangizibuka esibukweni, ngomehluko wokuthi, kulokhu, nganginemithunzi emnyama ngaphansi amehlo ami nezinwele ezihlaziyekile. Ngibuka isithombe sami esibukweni, ngazibuza: “Ubuso obumeleni bumele ini?” "Ngabe isho ukuthini le nkomba engokomfanekiso?"
Lokhu kuboniswa kwakufanekisela Mina okungeyona eyami ngokweqiniso, ngezinga elithile ukubukeka Komunye. Ngakho-ke, uma sizibuka esibukweni esiyinganekwane sibona ukubaluleka kokubukeka Kwabanye lapho ukhona, ngoba kufanekisela itshe le-angular elibalulekile esisekelweni se-humanism: “Nginguyena omunye, nginguye, kungenye enye ukuthi ngikhona ”.
Ukukhululeka ngalokho engangisanda ukukuqonda, ngiphambukile esibukweni lapho kungazelelwe, ukukhanya okuncane kwesikhukhula kwamanzi. Ngisanda kuthola ukuphunyuka emphakathini wokuhlukanisa, ocindezelayo nowesabekayo njengoba ngishiya, ngedwa, ngisemkhunjini ukuze nginqobe iGrail.
Ngiphonsa izingubo ezithile kwipotimende lami, ngokushesha ngangizulazula olwandle, ngifuna i-adventure ethokozisayo engaletha imizwa eningi.
Ngangihamba ngezinyawo cishe izinyanga ezimbili ngasolwandle, ngihamba, nginethemba elihle ngehora ngalinye, ngangivakashelwe ilanga eliza ukungiduduza, kuze kube sekupheleni kosuku.
Kusukela emgodini wechweba ekhoneni lami, ngibona inyanga igubuzela ebusweni bomhlaba futhi ngiyayithanda, kuyilapho amafu amancane ahlukene ahamba ebusuku, ubunzulu obujulileyo bendawo lapho izinkanyezi-izinhlamvu zomlilo ziboniswa khona izimfihlakalo ezingapheliyo. Ngivumela imimoya nokuqhuma kwesibindi ukuphatha phezu kwami, ngidabula endaweni engaziwa, olwandle olukhulu oluhlaza okwesibhakabhaka, ngidonsela ingoma ye-mermaids engibizelayo.
Ngingazi ukuthi ngizoyaphi, ngantanta njenge-buoy, ngigcwele umoya ngenxa yezifiso. Ngazizwa ngihlaselwe amaza amakhulu ayengihambisa ngokushesha okukhulu kube sengathi azongithatha afinyelele kimi ezifisweni zami. Ngiphathwe yizikhukhula, nganginethemba futhi ngizimisele ngisho noma lesi simo esingajwayelekile sanikeza umbono wokucinga ngenalithi endaweni eshisiwe. Ngemuva kwezinyanga ezingaphumelelanga impumelelo, ngisahamba ngomkhumbi njengohambi komkhumbi wakhe, ngaqala ukungabaza futhi ngaphelelwa yiliphi ithemba ngamathuba namathuba okubamba amazwibela ento efiswa umhlaba kepha kube nzima kakhulu ukuyithola. Ngakho-ke nginqume ukusebenzisa yonke impahla enginayo futhi ngaqala ukumemeza kakhulu ngangokuthi: "Uthando ukuphi?", "Uthando ziveze".
Kodwa ngaba nomuzwa wokuthi ngishumayela ehlane njengoba i-echo yezwi lami ibuyele kimi njenge-boomerang. Ukuwa ngamadolo ami, ngaphakamisa izandla zami ngasezulwini, ngicela uNkulunkulu ukuba angisize. Uma kuphela isibhakabhaka sivuliwe, efwini lomusi, lo mzuzi wehle, weyedwa okwazi ukuletha ukukhanya kulolu cwaningo olumnyama. Empeleni, ngangingazi ukuthi uthando luni. Ingabe kwakuyinto? Ingabe kwakuyisimo sokuba? Kwakungumzwelo? Konke engangingazi ukuthi ngithembele kulolu thando futhi ukuthi kwakudingeka ngikuthole ngokuphelele. Kodwa ngingabheka kanjani into engingazi?
Benginomqondo omncane nje kunencazelo yawo, kepha akukho lutho olwehlukanisa. Ngakhumbula kuphela engangikade ngitshelwa kona ukuthi: "Uthando luyabekezela, lugcwele umusa, lufuna konke, lukholwa yikho konke, luthemba konke, luxhasa konke futhi alubonakali". Ngabuthana ngakolunye uhlangothi ukuthi uma lo Thando engasoze afa, ngathola ithuba lokusondela, kepha mina ukutholwa ukuthi uThando wayengaphelelwa isikhathi kungenze ngakhala izinyembezi.
Ngangisanda kubona ukuthi kwakuzoba khona empilweni yami nokuthi kwakuzodingeka ukuba unakekele. kwakuseduze nathi.
Isahluko 3: Isivunguvungu Esibulalayo
Ngemva kwalesi sikhathi esincane sokuzindla okwangithutha ngobuningi, ngaya emkhunjini wesikebhe sami, ngizojabulela ubusuku obuhle bezinkanyezi, lapho ukushisa komoya kwakugqoke izindwangu zaso. Ngangilapho, ngithatha isithwebuli somkhathi okhanyayo, izingalo zami zawela naso ubuso ngenyanga. Ngemva kokuhamba ngesikebhe, ngenza umlotha omude we-foam owasakaza isikhangiso. Lesi sipelingi esiphelile saphulwa yisivunguvungu lapho umsakazo wokuqhuma umoya kanye nokuqhuma kwamagagasi ngokumelene nesigodlo somkhumbi wami wamemezela ukuthi kusondele isiphepho esivuthayo.
Njengoba behluleka ukumelana nokucindezela komoya, izindwangu zelwandle zahlonywa futhi zazinzima kakhulu kangangokuthi zanikela ngesihluku kusukela ku-fastener we-mast. Ngabuyela ngaphakathi ngaphakathi endlini yami ukuze ngibone ukuthi kudeshibhodi inaliti ye-anemometer yayikhathazekile. Angizange ngikuqonde lokho, kodwa ngaqonda ukuthi imizamo yami yayingenathemba. Kuyinto yokuchitha isikhathi ukuzama ukugcina isiqondiso: isikebhe sibuyele kuzo zonke izinkomba, sihlaselwa yilo olwandle olunzima. Ngezinye izikhathi i-Nature ikhumbula ukuphakama kwayo kuMuntu futhi iba yinto engenamsebenzi.
Kepha mina, ongumhloli wamazwe angenasibindi, angikwazanga ukubekezelwa ulwandle "olucwebile". Ngakho-ke, ngikhanyise ipayipi lami, ngaqonda i-cap yami futhi, ngangena ngokuqinile ngaphakathi kwikhabhathi.
Ngangingazange ngibe nokuphela kwekhasi lami ngaphandle, elinomoya wobuso ngodlame olunjalo kangangokuba izibuko zami zaziqhuma. Ngazama ukubamba kodwa belahlekile kakade emanzini olwandle. Ngibambe ipayipi yami nesigqoko sami, ngathuthuka, ngiya phansi, ngiya ngase-mast, lapho bekugcinwe khona, lapho bekugcinwe khona. Ngilwa kanzima ngokumelene nalezi zingqamuzana ezingenakunqotshwa kanye nalezi zivunguvungu ezinobudlova zemimoya ezishaya uhlangothi lwe-windward lwesikebhe sami. Ngasheshe nginqotshwa yiqhwaqho elinamandla elalisetshenziselwe, empini, lonke ibutho layo.
Konke kwakwenzekile ngokushesha kakhulu. Amafu ayebuthene esibhakabhakeni esibumnyama, ngakho-ke, isiphepho sasiqhakazile. Ukukhanya kokukhanyisa kagesi okulandelwa ngamatshe aselanga.
Ukudumala kolwandle olwakhuphuka lukhuphuke olwandle, oludiliziwe futhi luhlukaniswe esiqhingini somkhumbi wami kanye nesibopho. Exoshwa mayelana nezikhukhula zasendle zelwandle olungenangqondo, isikebhe sami sasingaqondakali esiya esweni lesiphepho.
Ngangisisulu sezilwandle esithukuthele okwakhiwa amaqhumitha angamamitha amahlanu kuya kwanguyisithupha phezulu, ngilungele ukungena emkhunjini wami futhi ngiwugwinyele emkhunjini. I-swirl eyayibukeka njengombala omnyama yayisondele futhi isondelene ne-infernal yayo yokuvunguza. Iso lesiphepho labhekana naso. Ngokungazelelwe, ngisondelene ngaphakathi futhi ngihlangene kwelinye lezinhlangothi.
Ekugcineni walahlekelwa impi engalingani futhi ngawela ngasekugcineni kolwandle ngesikebhe sami esasihamba ngezinkulungwane ezingaphansi kwezilwandle. Kodwa kwenzekani kimi?
Isahluko 4: Sinesiqhingi esingavamile
Ngangilele ebhishi elingasolwandle, ngibheke izilwane ezincane eziningi ezibanjwe phakathi kwamadwala kanye ne-ballet ekhululekile yama-ophidians amaningi anemibala eminingi.
Khona-ke, ngimi lapho, ngimemezela isibhakabhaka esingumzungezo esasigxuma emanzini athile lapho amaqhubu ephuka futhi emboza izinyawo zami ngamabhule amancane futhi amaqabunga ngokushesha okusheshayo athutha izitho zami ze-scaly. Ngangizungezile, ngabona amathuna ezilwane eziguquguqukayo ezihlobisa isihlabathi esicwebile sechweba elihle kakhulu. Ngaqonda ngokushesha ukuthi babeyi-jellyfishes nokuthi kufanele ngigweme ukuthintana uma bengingafuni ukuhlupheka ngenxa yesikhumba nokushisa.
Ngesabisa kakhulu ngendawo engcono kakhulu, ngathatha isinqumo sokushiya kule ndawo ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ngiphi indawo oya kuyo? Ngangingenalo umqondo. Ekugcineni, bengingazi ukuthi ngangiphi. Yini engase ibe yinkimbinkimbi ngaphezu kokuba yedwa, endaweni engaziwayo, kude nanoma iyiphi impucuko, ngaphandle kokusekelwa noma ukubekezela? Kancane kancane, ngazolula esihlabathini, ngithinta amalunga ami ukuze ngihlole impilo yami engokwenyama. Ngokumangazayo, ngangingenalutho oluphukile. Izitho zami zazinzima nje futhi zincane kakhulu. Lokhu kwenzeka kanjani ngemva kokupheka komkhumbi? Ngemuva kwemizuzu embalwa, ngavuka ngaqala ukuhamba.
Ngangifuna i-oasis lapho amanzi engasomile, umzimba wami wanyuka ngokuthuthumela futhi izindebe zami zome , Ngibheke futhi ngibona ingxenyana engaguquki. Ama-ergs afana namagagasi amakhulu kanye nolwandle ogwini lolusizi. Ngathathwa yizikhukhula ezinomile kanye nemimoya eshisayo neyomile. Ugwadule lwalubukeka njengemayini yedayimane enezici eziningi ezikhanya futhi zibonisa imisebe yelanga. Ngaphezulu kwalesi sici esibukeka ngobuhle, i-disc yama-solar ilindile, ngokubuka ukubhoboza, konke ngezansi.
Ngombono wami, ngabona, ngokusebenzisa izimpande zesihlabathi, okuye kwangandisa kakhulu ukubona kwami, isibalo ... futhi ngahamba ngale ndlela. Ekuthuthukeni kwami, ukuqhuma kwamagesi emoyeni kungishaya ngodlame oludlulele futhi kufanele ngivikele ubuso bami ngendwangu yendwangu. Zombili zazizwakalisa futhi zaphuphuthekisa, ngangizwa ubuhlungu obubangelwa umthelela wezinhlamvu ezincane zesihlabathi ezathinta isikhumba sami. Ukushisa kwakunzima kakhulu kulolu lolwandle futhi i sweatshirt ikhishwe emigodini yami ukuze iqhume ngesikhathi esisodwa esikhunjeni sami esikhuniwe. Nganginamafutha futhi ngangingekho amanzi. Kwadingeka ngifake emagcekeni ami, amandla adingekayo ukuze ngisinde.
Ngokungazelelwe, ngangizizwa ngine-inchoative eyangixosha ensimini yethemba futhi yanginika amandla okuqhubeka. Ngakhuphuka ke ngawela phansi izigulana ezinjengesikebhe ngokugubha. Ama-rags ami angase ahlolwe isimo sami esimpofu futhi angikwazi ukulinda ukuba ngibalekele esihlabathini esiqongweni sezintabeni zaseSahara. Ngingenakho ukusheshisa nesibindi, ngakhubeka futhi ngilahlekelwa phansi njengoba ngiwa, ubuso bami bubetha phansi, engazi lutho.
Kamuva, ngavula amehlo ami kancane kancane. Umbono wami wawungenangqondo. Ngagubha amehlo ngamehlo futhi ngabona umbala ophuzi ophuzi wanyamalala phezulu futhi inhliziyo yami yaphazamiseka yizikhukhula ze-melancholy and nostalgia.
Ngenxa yokubona okunjalo okuhle, izinyembezi zami zawela phansi izihlathi zami ezibonisa uthando lwami nenjabulo. Ngiphefumula, ngaqala ukukhwela kulokho okwakubonakala kufana nehlathi.
Yini engenzeka kimi endaweni enjalo? Ingabe lesi siqhingi sasinabantu? Imibuzo eminingi engaphenduli kuze kube sekupheleni kosuku.
Isahluko 5: Ukuphila, ihlathi
Ngishukunyiswa ngifuna ukwazi, ngenza indlela yami ekuqondeni ukuhlanza okukhulu. Kwakuyihlathi elincane kakhulu, elibuswa yimithi engamamitha angamashumi ayisithupha, ngakho-ke yenza njengendlela yokushisa ilanga ebeka emanzini ngaphansi kwezinkuni ezithinta izinkuni nezintuthwane ezifihliwe ngaphansi kwamacembe afile ekuqotheni. Ngaphansi kwalezi zihlahla ezide, ezinye izihlahla, ezinamandla futhi ezinamahlamvu aluhlaza okwesibhakabhaka, zinezimpande nezimpande ezibonakalayo zilenga emhlabeni ocebile wehlathi. Ngenkathi ngingena ngaphakathi ehlathini, ngangizwa umculo wezinkamba kanye nezinyoni ekhonsathini enhle kakhulu.
Ngibheke emkhathini, futhi ngangingenaso isikhathi esiningi ngaphambi kosuku lwama-twilight ngakho ngathatha isinyathelo sokuthola indawo yokuhlala yokuphepha ukuze ngihlale ebusuku.
Kodwa kungenzeka kanjani ukuba uphephile lapho uwedwa, uhaqwe ngamakati amakhulu adle, izinyoka ezinobuthi nezinye izilwane eziningana zasendle?
Ngaqala ukuqoqa amagatsha ukuze ngiphise umlilo. Kuwo wonke amahlombe ami, ngangikhetha amagatsha kanye namahlumela kuphela lapho ngiphawula, ngilalele phansi, inyoka enkulu. Ikhuphuka umzimba wayo obuthakathaka kancane kancane, yanciphisa inqwaba yayo ebomvu futhi amehlo ayo afundwa ngokuhlanganiswa izikali ezikhanyayo / ezikhazimulayo
Ngokwemvelo, ngiligijimela ikhanda ngenhloko ngenduku engangiyithathile futhi isidumbu sanyamalala enotshani obude. Lapho ngibuthele izinkuni ngokwanele, ngashiya izinkuni endaweni ethile eyomile futhi ngawa phansi ngomzuzwana ukucabanga. Into elula yayenziwe. Manje kwakudingeka ngilikhanyise ngomlilo ngendlela yokwahlukana kwezinkuni ezimbili. Omunye kwakufanele afakwe emhlabathini kanti elinye lalinamathele esigxotsheni esineziqu ezinomile. Ngemuva kokugubha ndawonye ngotshani ngenkathi ephuma emahlathini. Khona-ke, ngiliphumuza ngobumnene emagumbini okuqala futhi ilangabi lokuqala lavela.
Ngakho ngakwazi ukwenza umlilo wokushisa nokushisa okuncane, ngenxa yalezi zindlela zobukhokho. Ngaqala ukufudumala kancane ngoba ubusuku bebuhlungu, ngakho-ke, ngavuka ngifuna ukudla ukuze ngithule indlala yami. Ngangiqaphele ngesikhathi sokuhamba kwami ​​kwangaphambili, ukuthi umhlaba wahlakazeka ngamakhowe azo zonke izinhlobo. Ngaqoqa ngaphandle ngaphandle kokubonisa ukuthi bayabonakala. Ngidla konke.
Ngokushesha ngathandwa ngumdanso wezinambuzane, okwakuthandwa yi-incandescence yomlilo wezinkuni wangidabula ngaphandle komphefumulo.
Ngangena emilenzeni, ngilandela ngokuzwakalisa ukuziphendukela kwemvelo okukhanyayo kanye nezibani ze-lampyres ????? ezazingcolisa ubusuku obumnyama ngokukhanya. Ngazizwa ngijabule ngempela ukulalela lokhu kuhlanganiswa kokunyakaza nemisindo. Ngangikhohliwe ngisho nendawo eyingozi lapho ngangiyikho, ngenxa yalesi sibonakaliso esihle kakhulu.
Kodwa-ke, ngaphinde nganqunyelwa esimweni sami sokwethaba njengoba umkhathi ugcwele inkungu kanye nesibhakabhaka esinamafu kuqhuma ukuvumela imvula ithulule phezu kwezinkuni ezinamahlahla. Ngokukhanyayo ngangimanzi ukusuka ekhanda kuye ezinzwaneni kungathi kunomuntu ongijulele ibhakede lamanzi. Bengisanda kubanjwa ngageza. Umlilo wami ucishe wafa nezinkuni zase zingasebenzi. Ngidumele, ngabuka isibhakabhaka, ngincenga ubufakazi bokuthi bangisize lapho ngizwa izwi likhulumela phansi lithi: “Lala phansi ungesabi lutho, uzoqala uthuke kodwa-ke izinzwa zakho nokugcwala kwakho konke kuzolotsholwa ngephupho eliyinqaba” Ngemuva kwalokho, isibhakabhaka kwasulwa imvula yoma. Kepha umlilo obekade ukhanyiswe ngemizamo emikhulu ufile, manje sengishiswa amakhaza.
Ngithembele embhedeni owodwa odakeni, ngazama ukulala ngingenalutho, njengoba inhlobonhlobo yenyanga emithini ye-ebony yemithi yayidonsa imicabango yami. Ngithokozile ngesikhonyane esibuhlungu besibungu, ukuqhuma ama-cricket, i-twitter yama-parrots kanye nokuqhaqhazela kwezinkawu, ngangilele ebusuku. Ngangithuthumela, izinwele zami zaphela ekupheleni kwayo, inhliziyo yami yaqhuma futhi ngacabanga ukuthi izidlo zidla yonke indawo.
Konke okuzungezile, ebumnyameni, amehlo aqhekekile ezwe, lapho ngifele khona futhi ngizwa ukwanda kwezinqwaba zamanthambo amaningi amnyama avukelayo. Ngesabisa ngalesi simo esibucayi, ngangifuna ukumemeza ngethukile kodwa lapho ngivulwa umlomo wami, angikwazi ukukhuluma. Ngabe ngifuna ukugijima kodwa izandla zami zaphelelwa yisifo.
Ngingenalutho, ngathatha amagatsha ezinkuni ezigodini ezingenakubalwa nezidalwa engangiziqinisekisile, kodwa izikhali zami azikwazanga ukuzifinyelela. Ngaqala ukuhlukunyezwa kwezwe elingekho eqinisweni. Ngokungazelelwe, umzimba wami wonke wazanyazanyiswa yiziphazamiso ezazingenza ngifane nomuntu onesifo sokufa. Ngokushesha nje lapho ukuqhuma kwaqala, kwaba nzima kimi ukuphefumula. Ngaqala ukukhathazeka futhi ngangibuhlungu kangangokuthi ngangibheka sengathi ngabe ngizokufa ebuhlungu obukhulu. Khona-ke ngokuzumayo, sonke isinkwa sasihambe, ngokushesha njengoba sesifikile. Ngisesimweni sokukhulelwa, umzimba wami uyazamazama, futhi waqala ukucabanga. Kwakuwumzwelo othukuthele ukuba udonseleke ekubeni yize futhi akukho okunye, ukuze ukwazi ukusabela. Nganginamahloni ngempela futhi nginamandla.
Ngikhathele, ngiphambene nomuthi, ngikhumbula usuku olubuhlungu lobuntwana bami, emaphandleni, endlini yabazali bami. Into ekhunjulwa kakhulu ...
Isahluko 6: Isikhumbuzo
Ngangilokhu gone sishaywe Awukude endlini, mina kancane endlwaneni surface endaweni enkulu utshani exovwe ngokuvumelanayo Lapho izimbali emibalabala ezinjalo Njengoba Dandelions, Clovers, petunias, ukuhogela olunephunga elimnandi emoyeni qui NGABE kuthathwe amakha Lezi zimbali ezinhle.
Lapho ngibona imisele ngemuva kwami, ngabona ukuthi izimbali zazikhothame lapho ngidlula kungathi ngiyangibingelela nokuthi izintethe, amankomane namanye amabhungane athulule amaphiko awo futhi andiza emoyeni njengomoya okhazimulayo. Akungabazeki ukuthi ngangifakaza umbono omuhle kakhulu. Ngimakamelwe yile ngxenye enhle, ngamemeza: “Impilo, ngiyakuthanda! "
Ngaphezulu kwalesi sikhwama esibhakabhaka ilanga lalikhanya ngokukhanya, imisebe yalo ihlungwa ngamafu amakhulu.
Ngokungazelelwe udlame olunamandla lokukhanyisa, olulandelwa ukukhala kwezwi lokuthungatha, lwaluphazamisa ukuthula okwabusa esibhakabhakeni futhi kwawa nesithwathwa esinamandla phezu kwemifula eyanyakaziswa yi-gust enobudlova. Nganquma ukugwema imvula.
Ngimi ngimi ngaphansi kwesihlahla, ngibheka phezulu esihlahleni, lapho kukhona amaqabunga aluhlaza, ngidansa ngomoya ngenkathi amaqabunga afile ewela emagatsheni awo echibini elithulile. Ngesikhathi ngilindele ukuba imvula imise, ngibheke amaconsi amakhulu amanzi omunye nomunye emlenzeni weqabunga. (Lanceolée) ??? Ngithembele ngokumelene nesiqu esinamandla, ngangiyithanda futhi ngilalela amaxoxo amaningi emagodini echibini, abakholelwa esibhakabhakeni ngenani elikhulu lezinambuzane ezawela emlonyeni wazo.
Imvula ingene ngamandla emfuleni eyasabisa ngokushiya amabhange ayo. Ngokuphazima kweso, ngabona ukuthi sengisengozini ngoba ngangike ngatshelwa ukuthi kwakuyingozi kakhulu ukuhlala ngaphansi kwesihlahla ngesikhathi sesivunguvungu futhi ngaqala ukugijima ngokushesha ngangokunokwenzeka ngotshani obude obheke emfuleni. Ngikufinyelele ngokuphelele ngangihlala ebhange ukuze ngikhumbule kabusha imimoya yami. Angikaze ngithinte umhlabathi omanzi nodaka webhange, ukuthi isibani esinobudlova sikhala esibhakabhakeni, sishaya umuthi engangisanda kuwusebenzisa njengendawo yokukhosela. "Kube njani ukube ngihlale kule ndawo kancane?" Bengicabanga. Ngathuthumela futhi amazinyo ami axoxa hhayi ngenxa yokuthi ngangidonswe amanzi ngomsele kodwa ngoba ngangiseduze kakhulu nokufa… Ngisongelwe endaweni yesibeletho, ngabuka ngasesibhakabhakeni, amadada agxuma phakathi komhlanga neminduze yamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka. st blanc non ??) Isidoda esidala esishubile, yaqala ukuchaza imibuthano enkulu emoyeni futhi yafika emanzini eduze nowesifazane, yanyakazisa iplamu yayo enhle emhlophe. Lo mbukiso ungigcinele isimanga.
Imvula iyaqhubeka ibe emadlelweni, kodwa ngangingazi. Ngangihlala, ngibambe ikhanda lami ngezandla zami futhi ngimangele izinhlanzi ezazingena phakathi kwezilwane zasolwandle eziluhlaza okwesibhakabhaka nesibhakabhaka. Ngabe sengifaka isandla sami emanzini ahlanzekile, ngazama ukubamba eyodwa. Ukumomotheka, ngisusa isandla sami emanzini futhi ngawuvula, kodwa wawunedaka kuphela. Kodwa kwakugcwele impilo: izibungu, ama-grubs, ama-leeches, i-shellfish kanye nezinye izilwane ezifuywayo zazifihla kule ndawo ekukhuculeni. Ngenhlanhla ngisuse lo msila ogwini. Ngabe sengincike ekuhlanzeni izandla lapho ngisuka ebhange bese ngithola emanzini. Lapho, ngakhala ngokuzwakalayo ngoba ngangingakwazi ukugebha.
Ngacabanga ukuthi ngizogwinya lapho ngizwa ukuphathwa kwesandla. Ngingalindelekile, othile wangishiya emaceleni okufa. Ubaba wayesanda kukhulula.
Ukukhumbula lokhu okuhlangenwe nakho kokuphila kwami ​​kwagcwalisa inhliziyo yami nge-nostalgia. Ngangiphuthelwa lezi zikhathi, izikhathi zokujabula, ukuhleka, kodwa nokuhlukunyezwa futhi, ngilahlekelwa ekukhunjulweni kwengane, ngalala.
Isahluko 7: kuHarmony ne-Nature
Ngakusasa ekuseni, ngavuswa ngomsindo wezilwane owawuphethe i-concerto ngokuhlonipha kwami. Ehliswe esihlahleni, i-parrot ene-rainbow-like plumage yaqala i-cacophony kuyilapho izinyoni ezimibalabala zaziqhuma ngaphezu kwekhanda lami. Ngokwemvelo, ezinye izimpimbane ezinama-nimble zenyuka kusuka kwelinye igatsha liya kwelinye. Izinambuzane zezinambuzane nezinye izinhlobo zezinkawu zazilenga emithini, zibheke phansi, zenze ubuso nokugcoba emehlweni ami.
Ngasukuma, ngiselulela ukuze ngiduduze umzimba wami obunzima futhi nganquma ukuhamba ehlathini ngifuna izinto ezintsha.
Mina Wahamba emhlabeni manzi eziswebezelayo ezinamaphiko woodlice, weevils, slugs nezinambuzane yazo zonke izinhlobo, Lapho ngibona phambi kwami, a nomswani-bhungane ababenze ibhola elincane lobulongwe nethi Ingabe Izinto kokulikhiphela ukuze izimpi isidleke izimpi kamuva ziyifa efana i-acrobat. Kwakukhona nesihlahla esincane esesaba kakhulu ukuthi singabonakala esimweni somuthi.
Ngaphezu kwalokho, ngabona i-baltic ye-butterfly nezindiza-zezinyoni, ezahamba ngaphezu kwezimbali, zikhanyiswa ukukhanya kwazo. Khona-ke, ngathandwa yi-butterfly yokuphumula embuzweni we-eucalyptus, eyabonisa amaphiko ombala obala okwesibhakabhaka njalo lapho ihamba.
Kancane kancane, lo lepidopteron Ingabe yokukhipha, ne izimpi protractile lezi, umpe Lokho imbali enhle Lapho ngibona, dissimulated kule obuntofontofo neziqu esiyize, a chameleon lazy lizulazule.
I-Master of camflage, i-chameleon yaba yilwane elihle kakhulu ngokukwazi kwakhe ukushintsha umbala futhi ivumelane nesimo esithile. Ngenqabe ukuvumela lokhu kwenzeke phambi kwamehlo ami nobuso bami bebheke kuvemvane, okwenza ukunyakaza okukhulu emoyeni ukuba kusabise. I-butterfly yagijima. Ngangiziqhenya ngami.
Ngimemeza ngenjabulo, ngihamba ngesimo senjabulo, lapho, ngathola isikhala esingummangalo omnyama nesesiliva esicubile emhlabathini ukuze ngidle amaqanda ayo.
Isigubhu esivuthayo sasihlobisa i-web yayo ngokulandelana futhi ngokunembile, i-cobweb emhlophe, enobuningi, ehlanganisiwe, ecacile futhi engacacile. Ngangihamba ngokucophelela ukuze ngiyigweme.
Njengoba ngangijula ​​kakhulu ehlathini enezithelo ezihlukahlukene ze-citrus, ngangibhekene nazo ngoba ngangibhekene nemiphumela ye-mushroom e-hallucinogenic ngobusuku obuphambili. Ngalobo busuku, nganginenkinga yokwesaba futhi ngangingafuni lokho.
Lapho sengidle ngokwanele, nganquma ukuthola indawo lapho engaphepheka kukho konke lokhu kuhlupheka. Amakhethini abesanda kuqala "iculo lawo kuze kube sekushoneni kwelanga" kube sengathi angixwayisa ngokuthi sekusondele ukuthi ngiqale ukuhamba ebusuku. Ngokuphazima kweso, izinyathelo ezimbalwa nje, ngabona imbobo edwaleni, ebelibukeka njengokungena komhume.
Ngihlale isikhashana phambi kokuvulwa komhume futhi ngaphakamisa amehlo ami esibhakabhakeni ngababaza: “Ngiyabonga uNkulunkulu wami! “Lapho, ngifikelwa wumoya waphezulu, ngawa ngamadolo ami ngaqala ukuthandaza, ngigqolozele isibhakabhaka esigcwele izinkanyezi. Ngisanda kuqaphela ukuthi uNkulunkulu akakaze angilahle nokuthi wayesanginakekela. Kungani bengingabaza uthando lukaNkulunkulu ngenkathi nginokholo olungaka?
Kulo mzuzwana, amehlo ami avumela amaparele lachrymal aphume emathunzini ami angenalutho. Ngemva kwalokho, ngisula izandla zami ngasese, ngavuka wangena emhumeni ...
Isahluko 8: Ukuzalwa Okubuhlungu
Lapho ngifika emgodini omnyama womhume, ifu lamabhantshi laphuma emhumeni ukuze linyamalale ebumnyameni. Ngikhathele yilolu suku olukhuni nje ngisuke, ngahlala ngodonga lomhume futhi ngalala phansi emaminithini ambalwa emva kwalokho, ngasemnyango.
Ngosuku olulandelayo lapho ngivula amehlo ami, ngangizwa ubuhlungu bokugaya ngodokotela owenziwe ihhashi oye wabulala isikhumba sami ebusuku. Ngakwazi ukubonga isihlahla sokhuni ngezibani ezikhanyisa (ukuvulwa komhume) futhi ngavuka ngokungazelelwe futhi ngahamba ngandlela-thile ngasegatsheni ngizosebenzisa isibani sami kulo lonke ukuqhubeka kwami ​​ngaphansi komhlaba. Ngayifunda futhi ngaqala uhambo lwami olude ekujuleni komhlaba. Isibani esasiziphethe esandleni sami sikhanya ebumnyameni obungunaphakade. Ngangihamba emgwaqeni omncane futhi ovunguzayo. Ngezikhathi ezithile, ngayeka izikhathi ezimbalwa ukuze ngibambe umphefumulo wami, ngakho ngaqhubeka ngijula ​​ngaphakathi. Ngalokhu kuwela eGehena, ngangizwa umkhuhlane emzimbeni wami kanye namaphaphu ami nabalobi njengembali efa. Ngokushesha, ukuphefumula kwami ​​kwaba yindlala. Umoya, onzima futhi ocindezelayo emgodini, usongela ukucima umlilo ovuthayo futhi ulahlekelwe amandla. Ngangumnyama, lapho ekugcineni, ngemva kokuhamba isikhathi eside emasimeni alo mhlaba ngabona igalari enkulu phambi kwamehlo ami.
Esikhathini esiswini somhlabathi ezinye izakhi ze-limestone ze-stalagmites kanye ne-stalactites zakha i-largebubu enkulu futhi ngangibukeka njengento engenakuzisiza kuyo. Ukuze ngishiye le mgodi, ngihlala ngiseduze nasemadongeni emhumeni ongibonisa izimfihlakalo zesikhathi esidlule. Kulezi zindonga, ngangizizwa ngimidwebo yamapulangwe emidlalo ye-funerary kanye nokuzingela. Lobuciko be-parietal, obhalwe emadwaleni emhume
Ngicabanga, ngibambe isibhamu, ngibhekene nezidonshuni ezingaphezu kwama-shades angamahlanu futhi ngibhekene nesimo sezulu esibi esingalindelekile ngamadivaysi okuqala.
Njengoba mina approbation ngedwa Australopithecus, ngazizwa nosizi lokufa lihamba kancane umzimba wami mncane, Ukwandisa okusizwa ukushaya yami zenhliziyo emshaya ngokweqile inhliziyo yami wanginika umuzwa Kuyashaqisa ukuthi sasizofika out ngamandla, by kudutshulwa isikhumba elincanyana. Ngagubha, ngibambe isifuba sami sesobunxele ngesaba ukuhlaselwa kwenhliziyo lapho ngibona, ngiwela phansi. Ngokungazelelwe, nginomqondo ocacile wokulandela u-Ariane owenzayo futhi ngazihlanganisa ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ngilandela emanzini amanzi, ngifike endaweni lapho amanzi angaphansi komhlaba abe khona ngempela. Lapho, i-stalactite enkulu isengozini yokuwa phansi, njengenkemba yeDamocles. Kwadingeka ngenze isinqumo. Ngacabanga izikhathi ezimbalwa futhi ekugcineni, ngathola ukuphefumlelwa okukhulu ukungena emanzini acacile echwebeni.
Ngangifaka ukuzama ukugwema amadwala ephethe ukuphefumula ngesikhashana lapho ngibona ukukhanya kukhanya emanzini nje amamitha ambalwa ngaphezu kwami. Ngashesha ukuphuma ngiphakamise phezulu, ngimemeza ngenkululeko.
Njengoba ngixoshiwe emabilini emhlabathini, ngahlala ebhange ukuze ngiphefumule kahle lapho, ngokungazelelwe, ngizizwa ngisemuva. Ngaphenduka ngesikhashana nje ukubona isithunzi esimnyama njengejubane elibi phezu kwami.
Ezinye izingalo ezinamandla zangithinta, futhi nganginingi kangangokuthi ngilahlekelwa.
ISahluko 9 Sezihlawulelo Zomhlatshelo
Lapho ngiphinde ngivule amehlo ami, ngabona umbukiso ongaziwa phambi kwami. Ngangingakaze ngibabone laba bantu empilweni yami ngaphambili. Babengcolile kakhulu, bengenazo zonke izigqoko. Izinwele zabo ezinamahloni zawa ngobuso futhi amehlo abo agcwala intukuthelo.
Idizadiza elinamandla kakhulu elibhekene nomlilo omkhulu, ubheka unonya. Wayembethe imihlobiso yakhe yemilingo emnyama: umgexo owenziwe ngamathambo avela ekhanda, iphosta lemidwebo evuliwe namathambo omuntu, amaqabunga emilingo agcinwe ebhontini. Wangibheka ngamehlo okudabuka njengokungathi angibulale futhi inhliziyo yami igcwele ukwesaba.
Lapho efika ngakwesokunene sami, wayedonsa ngezwi eliphansi, futhi wayenomusa kakhulu. Wayelandelwa umqhudelwano futhi ama-magus, ayenamandla amakhulu okusebenzelana nemimoya, ayebonakala ekhuluma nemimoya futhi ngaqonda ukuthi isiphetho sami sithembele emphumweni walolu daba nangokwemvelo. Umoya wadabuka futhi wabubula sengathi amademoni acela umhlatshelo wami ukunciphisa intukuthelo yabo. Ubuso bami bubukeke lapho ngibona indebe enkulu kakhulu emakhazeni avuthayo. Ingabe lezi zizwe ezingenakudlwengula zihlela ukungena nami isidlo sakusihlwa? Le wizard yaxosha ummese wakhe wamagic futhi yazishaya izandla zami.
Kusukela ekusikeni, ama-magus aqoqa inani elincane legazi elaphuza ngokushesha esitsheni. Ngokungazelelwe, le wizard yayinembile futhi yaqala ijubane futhi ijubane elimangalisayo futhi lavele lawa phansi, lashona. Wayemi lapho kulesi sikhundla okwesikhashana, wabe esephakamisa kancane kancane ikhanda lakhe futhi wangibeka amehlo. Ngamahloni wacela othile ukuba alethe inkukhu. Wanciphisa umphimbo we-inkukhu enkulu emhlophe futhi wasakaza igazi lakhe emhlabathini othulini ekamu. Amakhosi ayamukele le libation njengomnikelo wezinto ezinhle engangizibona ukumomotheka ebusweni bomlingo. Wafika ukungibona futhi futhi wayala ngokukhululekile inkululeko yami, eyasheshe yadlala ngabasizi ababili. Ngazikhulula emigodini yami, ngiboshwa ngokusebenzisa uhlobo olumnyama lwama-concoction kuwo, ngakho-ke ngatshelwa ukuba ngibuthane nomlilo nalo lonke isizwe lapho umkhosi wenkolo wawuzophela khona. Ngaphambi kokupheka inkukhu ebhodweni, uShaman wasusa amathumbu enkukhu futhi waphinde wenza umkhuba wamanga. Ngesikhathi senkambiso, akekho ovunyelwe ukukhuluma ngaphandle kwamagus amakhulu, obengaba nesihawu ngokuhlambalaza kwabo futhi babezohlatshwa umyalo ekujezisweni. Ngenhlanhla lokhu akuzange kwenzeke. Njengoba ngangikhathazekile, lo mkhuba waqhubeka: Ngangikujabulela ukudla lezinkukhu esikhundleni sokuba omunye wabantu futhi ngikujabulele. Ekupheleni kwalo mkhosi, ngathunyelwa endlini futhi ngishiywa ngedwa Ngesikhathi sobusuku, ngangizwa amazwi okuthuka, ukuhleka kanye ne-palaver yabomdabu kodwa angizange ngikuqonde lokho abakushoyo. Ukuphupha, ngicabanga ukuthi bebazibuza ukuthi ngivelaphi, kungani ngibheka okuhlukile nokuthi bangenzani ngami ezinsukwini ezilandelayo. Ukuhlukunyezwa kokulala kwami, ngazibuza ukuthi bekuzokwenzekani kimi.
Ngingayibona futhi yini umndeni wami? Ngingabuyela emuva empucuko efanayo Yeyiphi kulabo engangiyithandayo endaweni engaziwa?
Ngithole lesi siqhingi sasezulwini lapho ngingaboshwa khona emaketangeni empucuko kanye nabanye abantu.
Lezi zinsizwa zinikeza kuqala ukubona umbono wokuphila ohlelweni lasendulo ngaphandle komthetho, kodwa ngasekuseni ngizokwamukela imithetho eyisisekelo kanye nemigomo yesizwe kanye nengozi yokukhulula inkululeko yami nenkululeko yami.
Isahluko 10: inhlanhla ihlangana
Ekukhanyeni kokuqala kokuntwela kwelanga ilanga lagcwala umhlaba wokukhanya kwawo. I-decoction ehlaba umuncu yayisetshenziselwa amanxeba ami futhi nginikezwa i-potion eyenziwe ngezitshalo zokwelapha kanye nezimpande. Khona-ke owesifazane omuhle kakhulu onomunwe wemilingo
umzimba wami omzimba kahle futhi ngomoya ophansi. Ngangiboshwe ngamaqabunga e-homeopathic ahlanganiswe nama-liana amancane, njengomama. Ngangilale embhedeni emhlane wami cishe cishe ngesonto futhi nsuku zonke, ngesikhathi esifanayo, ngibona isibalo esincane somdabu esihle esichazwe ngokukhanya phambi komnyango bese singena ngaphakathi endlini. Ngokushesha lapho ngibona isithunzi sakhe, yonke umphefumulo wami wagcwala injabulo engapheli.
Ngakhangwa yintokazi ebukeka kahle, ebiyinhle impela. Okuthile okumnandi ngaye ukuvusa yonke imizwa yami lapho ngimbuka. Ngesikhumba sakhe se-olive, amehlo akhe ama-hazel, izinwele zakhe ezinde ezimnyama nokumamatheka kwakhe okuhle, wayemuhle kakhulu ngaze nganquma ukumnika igama elithi "Houri".
Lo wesifazane wayehlale enza umkhuba ofanayo: eguqa eduze kombhede wami wezintambo, wanciphisa kancane kancane ikhanda lami ukuze anginike izinkondlo ezingavamile ezenziwe ngamagatsha anamakha nezimpande, ngakho washintsha ama-cataplasms ami ngokunakekelwa. Uma amehlo akhe efaka amehlo ami emphefumulweni ebusweni bakhe, i-caress of the wind.
Wayenginakekela njengoba ngangingumhlobo futhi wabonisa umusa othile ngokuhlala embhedeni wami futhi angigcine inkampani. Ngangingamazi okwamanje ngimangele ukuthambekela kwakhe futhi ngilindele lezi zikhathi zokunakekelwa ngentshiseko yokugcwele isifiso.
Ngaqala ukujabulela ukukholelwa kwami ​​futhi ngifisa sengathi ngeke kuphele. Ngoba, kwenzekani kimi futhi?
Isahluko 11: Ukuqala
Ngangizizwa kangcono kakhulu futhi imivimbo yami yayisinyamalale, ishiya izibazi kuphela. Ngolunye usuku ngangilindele ukuvakasha kukaHouri wami, ngabona ngokudumazeka okukhulu uShaman omkhulu angena endlini. Wafaka isifuba sakhe, wagijima eduze kwami ​​wabe esephonsa amagobolondo namathambo e-cowry emhlabathini ekhuluma ngamazwi obuwula.
Le wizard yababuza abafileyo futhi, okwesibili, yacela okhokho ukuba bamsize athathe isinqumo. Ukudweba esihlabathini isixhumanisi esiyinqaba phakathi kwezimpawu nemifanekiso yezithombe ze-iconographic, udwebe izinkinga engangizozidlula ukuze ngithole ilungelo lokuba yingxenye yesizwe.
Umqalisi uchazwa ngokucacile ngamandla angaphezu kwamandla ahlobene. Kwadingeka ngiphumelele ngemibala endizayo, engangenza ngikwazi ukujoyina isiyingi esinqunyiwe sabaqalayo. Le mbuthano ibanjelwe kuphela kumadoda. Lokhu kusungulwa empilweni kubonisa ukuhamba kusukela ebuntwaneni kuze kube ngumuntu omdala, lapho umuntu eqala ukuzimela futhi ozimele. Amadoda kuphela anelungelo lokuthola inkululeko, abesifazane basencike kumyeni wabo ngokwezinto ezibonakalayo nangokwengqondo.
Esivivinyweni sokuqala, kwakudingeka ngibe nokulawula ukwesaba nazo zonke izinhlobo zokuvutha kanye nokucindezeleka kwengqondo, okwakungumuntu obhekene nesizungu nokucindezeleka kungase kuzwe. Ngangizobuyela kuleli hlathini elihle futhi ngichitha izinsuku ezintathu lapho. Isivivinyo sesibili ngenye yezinto ezivivinyayo ezibalulekile zendlu ukuze ngivivinye isibindi sami sangempela kanye nemisebenzi yami. Esivivinyweni sesithathu nesokugcina, ngakwazi ukusebenza ngezandla zami emsebenzini wobuciko, ukuze ngivivinye ubuhlakani bami, amakhono obuciko futhi ngikhulule amandla ami okudala.
Akekho ovunyelwe ukuhileleka ekuqalisweni kwami ​​noma angisize nganoma iyiphi indlela. Ngaphandle kwalokho, angizange ngidinga usizo ngoba izimo zobomi zangiye zangisiza, esikhathini esidlule, ukuba ngibhekane nezimo ezifanayo. Ngako-ke ngithole ukulawulwa okuthile ngesithunzi seDALAI LAMA edume kakhulu futhi mina nginqoba lezi zivivinyo ezintathu ngokuhlonipha.
Ngobusuku obugcwele inyanga, ngathola amagama okugcina ekuhloliseni kwehlathi elingcwele ngenxa yale nkolelo emimoya yemvelo futhi ngihlonipha kakhulu izihlahla abaphatha ngazo ngenhlonipho. Umkhosi owawungumhlangano wabaqashi, wawuqondiswa yi-magus amakhulu. Ikhanda lami lalihlutshiwe futhi ngangihlanzwa kaningi emzimbeni wami. Emva kwalokho, iwijethi yayigcina ingitshela amazwi ami ngenkathi iguqa umzimba wami ngombono ongaphezu kwamandla. Lo mkhosi iqedwe isenzo hieratic we Magus elikhulu: Ikhanda lami izimisele phambi _him_, wangenzela ngaphansi Ukubukeka Iningi ezinzima, isifungo ukuthula nokwethembeka Khona wanginika lwaleli nemicibisholo ezimhlophe, uphawu we-phallus. Khona-ke, ngadunyiswa ngegama lobuzalwane futhi ngizoqala esikhathini esizayo.
Ekuseni ekuseni, ilanga elibomvu, liphuma emgodini walo futhi ukubukeka kwaleli bhola lomlilo kwakufanekisela ukuvuka kwami ​​siqu kwesinye isimiso esikhona. Ngabe ngaba yilungu lesizwe ngokusemthethweni futhi ngabuye ngazalwa ukuze ngiqale elinye impilo.
Isahluko 12: Umbuso Ongcwele
Ngosuku olulandelayo, ngashada noHouri, lo mphokisi, owadingeka angikhonze ngothando ngenkathi ngibuthakathaka. Phakathi nale mkhosi omkhulu ekuhlonipheni udumo lwami, ngangijabule ngokuboniswa okuhambisanayo kwezingoma kanye nezingoma zomculo ezihamba phambili phambi kwami.
Ekuqaleni komkhosi, abadansa balandela isigqi esincane se-djembe, base bedlala ngokweqile. Laba besifazane bahamba ngokukhululekile ngokuhambisa iziqhwa kancane, njengokungathi ezinye iziphakamiso ze-cosmic ziye zavezwa ngumzimba wazo. Le orchestra yokunyakaza namandla yayenziwa ngokuvumelana okuphelele. Badansa emibuthanweni, izingalo zelulekile, okuncane njengama-dervishes okhipha amandla angaphezu kwamandla abo.
Ngomsindo wamathamborini, abomdabu babethwa ngezandla ukuze bakhuthaze abadansi abahambisa umzimba wabo tempo womculo futhi banginika umbukiso omuhle kakhulu. Lezidansi zazinomqondo ongaqondakali futhi zenza isipelingi ngazibuka. Ngangimangala kakhulu lapho ngangihlezi eceleni kwami. Khona-ke, umculo wafika ngokushesha futhi wanda futhi wathatha ijubane elikhulu. Ngokungazelelwe, lapho umculo uphezulu, lo mdlalo wawuyeka futhi wonke umuntu wahlala.
Khona-ke, ngabuyela esihlalweni sami ngilandelwa ukuhalalisa okukhulu nokuhalalisela okuvela kuyo yonke indawo. Akungabazeki ukuthi kwakukhona umkhathi wokuhlangana nokuhlangana engangikubonanga ngaphambili. Wonke umphefumulo wami udunyiswe nge-swirl ye-Love kanye nenjabulo futhi ngiphuthele nje ukungaqondakali kwalo mkhosi.
Kamuva, phambi kokushona kwelanga elibomvu elibomvu, sibuthana ndawonye emlilweni oqhakazile, sasijabulela ukudla okunomusa futhi sasilalela inhloko yezindaba ezilandelanayo nezindabuko ezilandelwayo. Ngakho ekupheleni kokuhlwa okumangalisayo, mina noHouri sihlangene ngokuqinile ekuphileni.
Isahluko 13: I-Funerary Belielief
Ngangihlaba umxhwele kakhulu uhlelo lwezinhlanga lezi zinhlobo ezazingenalo. Ngempela, lo mphakatsi wawuziqhenya ngokumangalisayo ngemikhosi yawo yokusebenzelana nemimoya. Ukusungula amadoda, umshado nokulila kwaholela emikhosini isiko: ngokushesha lapho ilungu isizwe Kuphumelele kude, emkhosini esiyisikhumbuzo Ingabe Ukuhlelelwa Phakathi abantu qui waqala bethi, uzwakala ukuthi unejubane ubusuku Khona sashintsha kancane kancane nge isikhathi zomngcwabo . Abesabekayo, abanye besifazane babonisa ukucindezeleka kwabo ngokuziphonsa esihlabathini futhi bekhala ngokuhlambalaza. Abanye babo bahlambalaza umzimba wabo noma bazibopha, bekhala futhi bedumisa omunye owedlule.
Ngokushesha ngemva kokufa, iqembu labaqashi kwakufanele linakekele umzimba womuntu oshonile ngokuqondene nomphefumulo.
Bafaka umzimba wobumba obomvu ohlangene namafutha, base bephuma emahlathini. Emva kwalokho, bangcwatshwa umzimba ngomphumela wabo ngoba bakholelwa ukuthi umzimba unompilo ongafi futhi owaqhubeka nomsebenzi wayo. Inkolelo e emilingweni Ingabe kunezimpande Ngakho ngokujulile Ukuthi, Lapho ilungu lalesi sizwe yagula, Azenza akakholwanga attribute ukugula ukuntula impilo umgomo Kunalokho ukuze intukuthelo wonkulunkulu eziningi Yena Ukube Ngokuqinisekile sabo siphatfwa kabi.
Wazama ubuhlungu, ukukhumbula uma ebengalidluliselanga i- ngokuzithandela noma ngenxa yezimo abhekene komunye wemithetho Eziningi zalezi Taboo futhi fanele ukwenza ukuvuma phambi Shaman enkulu Wayengubani kuphela okunokwethenjelwa ukuze akhulule _him_, ngiyabonga e indodana kwemvelo amandla. Ngakho uShaman omkhulu ulapha ukuhlala, izimfihlo zamasiko futhi wazizwa engafuni ukuwabelana nabo. Ngenxa yale nqubo, isiko kanye nezinkolelo zokhokho zalesi sizwe zadluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane kuze kube namuhla.
Isahluko 14: Uhlelo lwezinhlanga
Ngangithakazelisa ngokukhethekile ukuthi lesi sizwe sasihlelwe kanjani nesistimu yaso yokubusa kanye nokuhlelwa kwesakhiwo. Babenomsebenzi wokufezekisa umndeni futhi lapho sebeqedile umsebenzi wabo womphakathi, kwakudingeka benze izibopho zenkolo.
Imisebenzi yasatshalaliswa ngokusho kwesimo somuntu ngaphakathi kwesizwe: abesifazane nabantwana ngakolunye uhlangothi, amadoda ngakolunye uhlangothi. Ekuseni, laba besifazane bahlanza ilineni yabo, bebeletha amanzi, bahlabelela ngesikhathi esifanayo ukuze bakhuthazane.
Esikhathini sosuku, sasizingela, sihamba nezinja zethu uBoubou noThith, esasisiza ukuba sithole umdlalo. Emuva wethu, sisezintweni zezinto esiziphethe kahle. Akukhona nje kuphela ukuthi kufanele siqonde indlela yokufihla ukuxuba emvelweni njengama-chameleons wangempela, kodwa kwakudingeka sibonise ukuxoshwa okukhulu ukuze singaphuthelwa isisulu ngesikhathi esifanele. Ngemuva kosuku olunzima lokuzingela, lapho sibuyela ekamu nomdlalo, abafazi bethu ababebekezele ukubekezela kokukhathazeka basiphosa izandla zabo, benqoba injabulo. Kancane kancane, izingane ezibuye zibuke ukubuya kwethu, zenza ama-capers esihlabathini.
Bavuka ngenjabulo futhi sabuyela emagama ethu. Khona-ke laba besifazane bazama ukupheka ezinkalweni ezinkulu ezibomvu zaseTerracotta. Lezi zitshalo zokugqoka zazisetshenziselwa ukuhlangana komdlalo. Ngangijabulela izimfanelo zalaba besifazane abasebenzisa amakhambi amanothi amaningi ekulungiseleleni ukudla. Ngangiyithanda le gastronomy eyayihlosiwe eyayingafani nalokho enganginakho emhlabeni nokuthi yini engangifuna ukuyenza esikhathini esizayo, ukuze ngimise izibopho zomndeni ngaphakathi kwesizwe. Ngemva kokudla ukudla, sahamba, mina noHouri, sichitha amahora amaningi sigeza ngaphansi kwamanzi omfula.
Khona-ke, sangena esondelene namagatsha amaqabunga ebhange, esivela esizweni sonke esasibuka ngathi sihleka usulu kodwa futhi sasihlolisisa ubudlelwane bethu nokusizakala okukhulu. Ngemva kwalokho, emva kobusuku obunye, lapho sizwa ekuseni, sasithandana. Kuye, okwedlule akusekho khona, ikusasa alizange lisize futhi umzuzu wamanje ubalulekile. Nginganikeza noma yini ukugcina lezi zinsuku ziphakade futhi lolu Luthando luhambile. NOKHO, kwase kuyisikhashana usuku olulodwa, lapho wonke umuntu kwadingeka wabuyela emaphandleni futhi ilanga seliphelile ngesikhathi umkhathizwe, Ngisabheka, kuphela ogwini, le qui sikhukhumale iphahlazeka Against ogwini futhi insephe ke amagwebu futhi yami yathinteka A uzamcolo ISIFISO .
Isahluko 15: Iphutha
Ngangilele phansi ngesihlabathi futhi ngiphakamise ukukhanya okwakushiwo yi-rays yokugcina kwelanga, ethatha umbala ophuzi no-orange.
Ngenkathi leli zwekazi elihle kakhulu lancipha kancane kancane
phambi kokugcwaliswa kwami ​​ngamehlo, ngilalele ingoma yama-seagulls
okuyinto, njengama-mermaids, ezwakala ukungibiza futhi ungitshele ukuba ngize, futhi ngizwa ukuqhuma kwamagagasi owaphuka ngokuzwakalayo emadwaleni anamandla. Ukuxuba kwalezi zomsindo ezikhiqizwa umculo omnandi, owangihlaba umxhwele futhi, ngokuvala kancane izinwele zami, ngahlekisa ngomsindo. Manje ngigcwele u-nostalgia, ngicabanga ukuthi ngishiye ngaphandle kwezindaba futhi ngaqaphela ukuthi konke okwenziwe umthambo ongokomfanekiso, okwangivumelana nami ezimpandeni zami.
Ngenza kude kangaka nabazali bami ngabathanda. Manje ngangingazizwa ukuthi babekuphi empilweni yami. Ngangicabanga ukuthi impilo ayifanele ngaphandle kosawoti Wothando nokushisa kwamagama. Ngidinga ukukhuluma, ukuxoxisana nomuntu futhi ngiwavulele inhliziyo yami Kodwa lapha, nginomuzwa wokuba ngedwa emhlabeni wonke. Ngokungazelelwe, ngubani owayekhathazekile ngokudabuka kwami, ngubani owayekhathazekile ngokungabi khona kwami, beza ukungifuna. Wangibamba ngengalo futhi sabuyela ekamelweni.
Ngingathanda ukubuyela ezweni lakithi. Kumelwe ukuba ufunde imicabango yami. Wabonakala ehlelekile futhi ezolile kodwa ngazizwa ngizwela ukuthi inhliziyo yakhe yaphukile. Akazange abe nezinyembezi azi ukuthi kuzokwenzeka ngosuku olulodwa, wayezilungiselele ngokwengqondo ukuze ahlukane. Wangitshela ukuthi wayesekulungele ukubhekana nokuhamba kwami ​​nokuthi ngeke kumthinte kakhulu. Khona-ke, lapho sifika emzaneni, wakhulula isandla sakhe, washesha isinyathelo futhi wazitholela emgwaqweni omncane, isithunzi sakhe saphela phansi.
Isahluko 16: Amachashazi okuphulukisa
Ngangishiye impucuko esikhathini eside esidlule, sekuyiminyaka emithathu ... Ngisebenzise okuningi kuwo wonke ubuchwepheshe, izinhlelo zemali kanye nesayensi, lapho ngifunde khona ukulalela izihlahla, izimbali nezinyoni , ngoba bakhuluma nathi. Bayakwazi ukuxhumana nathi, uma silalela ulimi lwabo, yikuphi iparadesi akuyona eyona yokuphila ngemva kokufa kodwa ikhona ngempela ezintweni eziphambili kakhulu zemvelo. Ngisebenzise isikhathi esiningi ngifuna uthando, ukuphepha, nokwaneliseka ... Kodwa ngase ngifundile ukuthi kwakungenakwenzeka ukuba nenjabulo eyishumi nesithupha ngokwawo, ngoba kungenakwenzeka. akukho ukuzisola.
Ngakusasa ekuseni, emva kobusuku obude bokuzindla, ngatshela isizwe ngesifiso sami sokushiya lesi siqhingi. Nginomlomo omuhle kusukela kuShaman omkhulu ophikisana nokuthi ngifuna ukushiya umkami, uHouri. Kodwa, nokho, wanginika ukuvuma kwakhe ngenhlamba. Kwakukhona iqembu elikhunjulwayo ekuhlonipheni kwami ​​ngalolo suku, ekunteni kokusa, i-wizard endala ibona abantu beqeda izihlahla ukuze benze isikhungo esincane. Ngemva kwesonto, isizwe sonke sabuthana ogwini. Abanye bomdabu banginika isipho esingokomfanekiso sokubonisa ubungane bami kimi.
Um Shaman omkhulu, umlingisi onjalo okhathazayo nothule wangimangaza lapho ekhuluma la mazwi ambalwa: "isilinganisovata shitoni tivatou ngeke cocomora kisanfi ajasou mirugaga maha titikouaka iruba" okwasho ukuthi "ukukhanya kukanembeza kungaphakathi kuwe. Uma ukuqonda lokhu, ukucinga okungaziwa kanye nokomela kwakho okungenakushiwo kuzophela. ” Ngemuva kwalokho wabamba isandla sakhe esimanzi futhi wanginika esisodwa sazo ukuze singivikele kulo lonke uhambo lwami. Ngambonga ngokunikina ikhanda. Umzuzu obuhlungu kakhulu kimi kwaba lapho uHouri esondela esikebheni. Lapho esondela, amehlo akhe eveza konke ukuhlupheka kwakhe. Wangiqabula kancane ezindebeni zami, wabe esehamba.
Khona-ke ukuthula okukhulu kwagcwalisa umoya. Khona-ke, ukuthula, ngithandana nale paradesi ngesikhathi sokugcina, ngaphandle kwezwi, ngaphandle kokuphula ibhaluni. ngobukhulu balo. Ekugcineni, emva kwalesi sikhathi sombono ojulile, ngashiya emkhatsini wemikhumbi, nginomuzwa wenjabulo ohlangene nokufutheka, ngiphendulela emuva kulo mhlaba wonke wezimpawu ze-totems nama-taboos.
Lezi zimo zenzeke ngomzimba, futhi sekufinyelele ezingeni elisha lokuqaphela.
Ngakho-ke, ngilahlekile ukukhathazeka kwami, ukungabaza kwami, ukukhathazeka kwami ​​ngamehlo nangomuso, ngiphila kuphela namhlanje. Ukuphila kwami ​​kuye kwafana nolwandle olucacile ngaphandle kokuvuvukala noma amagagasi. Ngangithunyiswa umoya njengamaqembu amadoda nabesifazane. Khona-ke, lapho ilanga lishayalala phansi, ngathuthela endaweni ekude kakhulu, ngishiya ngemuva komkhumbi omude ngemva kokuhamba kwesikebhe, ngibheke ngesikhathi esifanayo ukukholelwa kwezwe eliphelele lifa ...
izigaba Khetha isigaba Ukususwa AFRIKHEPRI-TV UKUPHAKATHI NOKUBHALA IZINCWADI ZAMABHAYIBHELI ZOKUHLALA I-AFRICAN CUISINE UKUKHULUMA ABASEBENZI BAMASEBENZI UKUZIJABULISA idokhumentari IZINGANE INDAWO ESIPHILA KUYO UBUGQILA IZINTO ZEZENCULTURAL IZINDABA ZEBHIZINISI AMAFOMANA AFRIKA IMIPHUMA YOKUBHALA UMLANDO OTHIWEYO NOKUPHILA AMAZIMU AFRIKA UKUBHALISWA / Login ABANTU ABAKHULU ABAKHULU NABASEBENZI KINDLE UMBONO WE KAMA sezincwadi I-TV LIVE INCWADI YOKUTHENGA INCWADI YOKUDLULA Incwadi ye-PDF UMBUSELELO WOKUPHAKATHI UMCULO IZINDABA, IZINDABA PARADIGM KAMIT I-KAMITE THOUGHT ABANTU BASE-AFRICAN NEMAGA I-PHILOSOPHY & PSYCHOLOGY Philosophy and Psychology Health and Medicine DLALA izinkondlo PSYCHART KOMZIMBA UMBUSO WAMA-AFRIKA IMPILO NEMPILO ISAYENSI NEZIMPILO UKUHLELA UKUPHILA NEMIBUZO Imidlalo IZITHOMBE ZAMATHEMI GROBLI URGENT / NEWS IMIQOPHI I-Web-TV